Posted: Adoolessa/July 8, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (3)
Jul 8, 13 at 5:07 pm
Obbo Hundasaa Waaqwayyaa waan yeroo dheeraf sammuu koo keessaa nannna’aa ture kaafte akka gaaritti ibsuu keetif galata argadhu! Waan kana akka laayyotti ilaaluu hin qabnu akkan hubadhutti. Afaan keenya qabaanya keenya isa guddaadha. Kaleessaa goototni keenya gatii lubbuu itti kanfalanii du’a irraa baraaraniiru, hara’a ammoo nuti du’atti geessaa jira. Raadiyoon karaa websayitii hojjatan waan kana itti dhimmanii namoota maqaan isaani asitti tuqaman kan akka Obbo Dhaaba Wayyeessa fi Gammachu Malkaa waan kana irratti ilaalcha isaani gaafatani uumata keenyaaf dhiyessuu qabu. Keessattu waan kana irratti Obbo Dhaaban waa nuun jechuudha qabu. Yeroo dhuyoo fiilmi dheera Dukkana Dorroba jedhamu hojjata jiru jechuu dhagaheen akka oromoo tokkootti baayeen hawwiin eega ture, ammas eegaa jira. Maalirraan gahan laata, nuuf haa gaafataman! Afaan oromoo garammitti deema jira…mariin hawaasa qophaa’ee irratti mari’atamuu qaba!
Jul 9, 13 at 11:59 am
Obboo Hundasaa , Dhimmaa oromoota mari’achisu kan irratii bareesitee nu dhiyeesuu keetiifi galata gudda qabdaa. Akka atii jetetti boodatii arkifaamu gudinaa hogbaruu fi filmii affaan oromo sababoota adda addaa haa jiraatan malee ini guddaan dadhabina ummata keenya akka tahee wal hin mormisiisuu je’en yadaa. Haatahu malee sababoota ummata keenyaa dadhabsisan akka layotii wan ilaalamuu dandahan mitii kan je’dhu yadan qabaa. sababoota kana ilaalcha gadii fagoon ykn qorannodhan xinxalamuu qabuu. kanaf waldoota qorannolee kan akka OSA fi ka biro qoranno irratii gageesanii furmaata wajiin ummataf dhiyeesuu dandayuu je’en yadaa.
Dhimma oromoo bayee mari’achisuu dandayuu nu dhiyeesu keetiif heddu galatoomi.
Jul 13, 13 at 1:34 am
Hedduu galatoomi yaada kana uummata itti gadi baasuu keetiif. Afaanni jereenya saba tokkoof murteessaa dha. Oromoonis cunqursaa waggaa dhiba caalu dandamatee, baduu irraa hafee har’a ga’uun isaa waan afaan isaa dhukatee baadiyaa keessa itti hojjechaa tureef. Har’a immoo Afaan Oromoo guddatee sadarkaa kana irra ga’uun isaa hedduu nama gammachiisa. Guddini kunis immoo kan dhufuu danda’ee soora wareega lubbuu gootota Oromootiin. Waaqayyoo lubbuu isaaniif qabbana haa kennuu !
Haa ta’u malee, Afaan Oromoo afaan sooressa rakkina tokko malee dafee guddatee dagaagu ta’ee osoo jiruu, amma illee hanga guddachuu danda’u tokko guddachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf, seerlugi/hiramadubbii ( Grammar ) Afaan Oromoo seera qabatee hin jiru. Oromooti akkuma fedhii mata mataa isaaniit barreesu. Naannoo Oromiyaa adda addaa keessa loqoda adda addaa tu jira. Kun rakkoo hin fiidu yeroo dheeraa keessa walfudhachaa dhufa. Dhalooti ammaa hedduu walitti dhi’aachaa waan jiraniif ni sirreesu.
Barreefama hedduu keessati wanti naf hin gallee tokko akka kanaa gadiiti:
Mirroo (prepositions) maxxannee ( Affix ) ta’u moo hin ta’an ?
Fky. Isa itti kenni jedhama moo, isatti kenni jedhama ?
Muka irra jira jedhama moo, mukarra jira jedhama ?
Hin beeku jedhama moo, hinbeeku jedhama ?
Wal beekna jedham moo, walbeekna jedhama ?
Oromiyaa irraan dhufe jedhama moo, Oromiyaarraan dhufe jedham ?
Namooti akka addaa addaa itti barreessu, garuu ani kan na itti fakkaatu mirroon (prepositions) akka maxxannee (Affix) osoo hin taanee mataa isaanii danda’anii warra dhaabbatanii dha jedheen amana. Warrii kun fakkeenya yartuu dha. Kan kana fafakaatan hedduu tu jira.
Afaan Oromoo keessa hiccitii seerluga/hiramadubbii gadi fagoo tu jira. Gadi fageenya kana keessa lixinee haa ilaallu mee.